Alice 13 Mampalahelo fa manentana ny tenin'i Zouroku - Hafa
Teny notsongaina ho an'i Alice Zouroku 12 izay hamely anao tsara eo amin'ny * fahatsapana *
Alice & Zouroku Character nanonona:
Alice To Zouroku , inona no holazaiko?
Andian-tantara anime izay mahavita mampifangaro fotoana mahafatifaty, Kawaii miaraka amina tsipika tantara lalina sy maizina ary mivadika.
Ary asa tsara izany.
Alice To Zouroku dia andiany anime fohy , fizarana 12 fotsiny. Fa ny fotoana maizina indrindra amin'ilay andiany dia ny famirapiratan'ireo teny nalaina ireo.
Ary maro amin'ireo teny nindramina ireo no hahatratra anao amin'ny fahatsapana ary hisintona ny tadin'ny fonao.
Ary tsy maninona na manentana ny fanahinao izany, azonao atao ny mampifandray na mahatonga anao hahatsapa ho an'ny karazana anime tsirairay.
Andao hiroboka amin'ireto teny nalaina 12 nataon'i Alice To Zouroku ireto avy amin'ny andiany anime mahavariana 2017.
Alice To Zouroku Quotes # 1
'Mifampiankina isika hivoahana satria misy zavatra tsy azonao atao samirery. Na hendry na mahavita inona ianao. ” - Zouroku Kashimura
Tsy izany ve no marina? Ary izany dia tsy jerena ny maha-egoiste antsika na ny fahatokisantsika tena.
Teny notsongaina Hatori Shikishima # 2
“Andriamanitra mihaino ve ianao? Ny zavatra, tsy mifankatia intsony i neny sy i dada. Ary heloko ny maha-zanakavavy tsy misy ilana azy. ' - Hatori Shikishima
Noheveriko fa fotoana nalahelo tao Alice To Zouroku ity teny nalaina ity. Indrindra amin'ny toe-javatra.
Raha nijery ny sarimiaina ianao dia hahatsapa ho matanjaka kokoa momba an'io Hatori Shikishima quote.
Fanononana an'i Miriam Tachibana # 3
'Raha midika hoe mahita ny endriny indray izany dia hanao zavatra rehetra aho.' - Miriam Tachibana
Fanononana Yonaga Hinagiri # 4
“Tsy noeritreretinay ho nanjavona vetivety daholo ny zavatra nanananay. Fa indray mipy maso fotsiny dia lasa. ” - Yonaga Hinagiri
folo voalohany amin'ny fotoana rehetra
Teny nalaina iray hafa izay hamely anao amin'ny fahatsapana. Indrindra rehefa azonao ny toe-javatra ao ambadik'izany.
Fanononana an'i Miriam Tachibana # 5
'Irery aho. Izaho dia irery elaela. Teny an-dàlana dia hitako fa nivily lalana ireo fitaovana. Tapaka aho. Saingy mbola tsy afaka mijanona ihany aho. ' - Miriam Tachibana
Zouroku Kashimura Quotes # 6
'Raha misy zavatra fantatro tsara dia tsy misy olona tonga lafatra eto amin'ity tontolo ity.' - Zouroku Kashimura
Fahendren'i Zouroku amin'ny alàlan'ny andiany anime dia tsy voavidim-bola. Ary tiako ny anjara asany ao anatin'izany rehetra izany.
Zouroku Kashimura Quotes # 7
'Heverinao fa azonao atao ny manamarina ny fanidiana zaza, ny fitsapana azy, ny fanaparitahana azy ary iza koa no mahalala inona satria amin'ny farany dia tombony ho an'ny olombelona izany?' - Zouroku Kashimura
Teny nindramin'i Sana Kashimura # 8
“Indray andro any te-ho tonga olombelona aho. na raha tsy olombelona, ​​dia farafaharatsiny mba misy zavatra tena misy marina noho izaho. ” - Sana Kashimura
Sana Kashimura Quotes # 9 (nofinofy)
'Tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona hoe iza izy ireo, ao anatin'izany aho. Mbola mitady io valiny io aho. ' - Alice & Zouroku
Ity teny nalaina ity dia voatonona nandritra ny dingana nofinofin'i Sana fohy. Aiza no misy ny kinova mijery azy taloha.
silaka tantaram-pitiavana tsara indrindra amin'ny fiainana
Teny notsongaina nataon'i Shizuku Ichijou # 10
“Toy ny arsenalin'olombelona aho. Fa tsy nangataka an'io aho. Na inona na inona herin'ireny fahefana ireny, tsy mino aho fa nomena antsika izy ireo mba hanomezana ny faniriantsika. ' - Shizuku Ichijou
Azonao atao ny mieritreritra hery toy ny talenta, fahaizana ary fahaiza-manao amin'ny tena fiainana.
Tsy misy omena antsika ny talentantsika satria naniry ny hanana izany isika.
Fa kosa, nomena azy ireo ho amin'ny tanjona iray hafa isika rehetra.
Teny nindramin'i Sana Kashimura # 11
'Tsy fantatro ny antony itovizako toy izao., Ny antony nanomezana ahy endrika tovovavy. Fa na inona na inona antony nisafidianan'ny olona hanao ahy toy izao. Ary mahatonga ahy hieritreritra izany fa angamba misy zavatra kasaiko hotanterahina amin'ny endrik'olombelona. ' - Sana Kashimura
Ity teny nalaina ity dia mitovy amin'ny farany nataon'i Shizuku. Ary lalina tokoa raha mieritreritra an'izany ianao!
Zouroku Kashimura Quotes # 12
“Mendrika miaraka amin'ny olona hanampy anao ianao rehefa tena ilainao izany. Na iza na iza ianao na iza. ” - Zouroku Kashimura
Ny mpankafy sasany dia mety tsy mankasitraka ilay dinika amin'ilay fizarana nalaina tamin'ity. Fa nahafinaritra ahy izany.
Ary zavatra azontsika rehetra atao ny mifandray amin'ny fomba sasany.
Iza amin'ireo teny notsongain'i Alice To Zouroku no tianao indrindra?
Raha manana sosokevitra na eritreritra ianao dia mametraha hevitra etsy ambany.
Teny Rokudenashi 7 izay hisarika ny sainao.
Mpandray anjara Anime 15 lehibe izay mandà ny hilavo lefona rehefa mafy ny fiainana.